ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့်အခြား မြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြန် လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏Video Conferencing System ဖြင့်ပြု လုပ်သည့်(zoom Meeting)လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဥ်(၅/၂၀၂၀ကို အောက်တိုဘာ(၁၄)ရက်နံနက် (၁၀)နာရီကတောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ရှမ်းပြည် နယ်တွင်ယခုလယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြန် လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီမှပေးပို့ လာသောမြေယာကိစ္စတိုင်ကြားစာပေါင်း(၆၉၃)မှုရှိပြီး၊ (၄၇၄)မှုကိုပိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးစိစစ်ဆဲအမှု(၂၁၉)မှု ကျန်ရှိကာပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ (၆၈.၄၀%)ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်နယ်သို့တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားစာပေါင်း(၆၃၄)မှုရှိပြီး၊ (၄၁၆)မှုကိုပိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၊ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ(၆၆ %) ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်စိစစ်ရန်ကျန်ရှိသည့်ဗဟိုအမှု(၂၁၉)မှု၊ ပြည်နယ်အမှု(၂၁၈)မှု၊ စုစုပေါင်း(၄၃၇)မှု အားလုံးကို၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တွင်(၉၀%)ကျော် ပြီးပြတ်ရေးဗဟိုကောမတီမှနှိုးဆော်လျက်ရှိပြီး၊ ခရိုင်မြေ/စစ်ကော်မတီများအနေဖြင့်သတ်မှတ် ကာလ အတွင်း ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုကော်မတီ၏မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဥ်(၅၂)ချက်၊ ညွှန်ကြားချက် များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပြီးပြတ်အောင်အလေးထားစိစစ်ဖြေ ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ယခုလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီလက်ထက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများမှ စုစုပေါင်းပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့် အမှုကိစ္စပေါင်း(၁၆၆)မှု၊ မြေဧရိယာစုစုပေါင်း(၄၂၀၄၅.၁၃၀)ဧကရှိပြီး၊ မြေ ဧရိယာ (၄၀၅၈၈.၃၈၅)ဧကကိုသက်ဆိုင်ရာလက်ဝယ်သို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင် ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကျန်မြေဧရိယာမှာ (၁၄၅၆.၇၄၅)ဧကဖြစ်ပြီး၊ ကျန်မြေများကိုသက်ဆိုင်ရာသို့ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ရန်ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့််စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးဦးဆန်းဝင်းမှ အမှုတစ်မှုချင်း အလိုက်ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာသည့်ခရိုင်မြေ/စစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ တွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူးများက ဆွေးနွေး တင်ပြကြကာ အထွေထွေဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရသည်။
ထို့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည် နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ကနိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားကြောင်းသိရှိရသည်။
လွိုင်လင် အောက်တိုဘာ - ၈
လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လွိုင်လင်ခရိုင် အတွင်းရှိ COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် (CERP)အရ အနာကြီးရောဂါကုဂေဟာရှိသူများအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးငွေ (၆၈.၅)သိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းကို အောက်တိုဘာ(၇)ရက် ညနေ(၃)နာရီခွဲက အနာကြီးရောဂါကုဂေဟာခန်းမတွင် ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
ဟိုခိုက်အနာကြီးရောဂါကုဂေဟာတာဝန်ခံ Fh. Tacisio Kyaw Aye ကကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရာ အနာကြီးရောဂါကုဝေဒနာရှင်များအတွက် သွားလာရေးအခက်အခဲရှိသောကြောင့် လမ်းကောင်းမွန်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးနှင့် အနာကြီးရောဂါဝေဒနာရှင်(၁၃၇)ဦးအတွက် ငွေ(၆၈.၅)သိန်း လာရောက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဟိုခိုက်အနာကြီးရောဂါကုဂေဟာတာဝန်ခံ Fh. Tacisio Kyaw Aye မှတင်ပြချက်များကို မိမိတို့၏အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် အနာကြီးရောဂါဝေဒနာရှင် (၁၃၇)ဦးအတွက် ငွေကျပ်(၆၈.၅)သိန်းကိုပေးအပ်ရာ ဟိုခိုက်အနာကြီးရောဂါကုဂေဟာတာဝန်ခံ Fh. Tacisio Kyaw Aye မှ လက်ခံရယူပြီး အနာကြီးရောဂါဝေဒနာရှင်များကိုလည်း ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း (COVID-19) ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြု နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အလှူရှင်များမှ လာရောက်လှူဒါန်းကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ခရိုင်/မြို့နယ် စာရင်းစစ်ရုံးများမှ အလှူငွေကျပ်(၁၀)သိန်းကို ရှမ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်နန်းဝိုးဟိန်းမှ ပေးအပ်လှူဒါန်း၍လည်းကောင်း၊ Kyaukse Silk Co.,Ltd ၊ Myanmar Silk Co.,Ltd တို့မှ Medical Masks (၄၈၀၀၀)ခု၊ Face Shield (၃၀၀၀)ခု၊ Hand Gel (၈)ဖာ (၃၂၀)ဗူးတို့ကို လှူဒါန်းပေးကြရာ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ များကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၈
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းကို အောက်တိုဘာ(၈)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ဆက်လက်၍ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့မှ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၂၅)သိန်း ပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အယ်နန်းခမ်းက လက်ခံ ရယူကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆိုက်ခေါင် အောက်တိုဘာ - ၉
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် လင်းခေးခရိုင်နယ်စပ်ရှိ တံတားဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက် သည့် ကျွန်းတောင်-ကျောက်တစ်လုံးကြီး နောင်ယာဆိုင်း-ဆိုက်ခေါင်-ပွန်ချောင်း-မောက်မယ်လမ်းပေါ်ရှိ တံတား အမှတ်(၉/၄၅) ပွန်ချောင်းတံတားဖွင့်လှစ်ခြင်းကို အောက်တိုဘာ(၉)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် လင်းခေးခရိုင် နယ်စပ်၌ ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် စတင်တာဝန် ယူခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့အချိန်ထိ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ကတ္တရာကွန်ကရစ် AC လမ်းမိုင်ပေါင်း(၂၀၀)ခန့်၊ ကွန်ကရစ်လမ်းမိုင်(၈၀)ခန့်၊ ကတ္တရာလမ်းသစ်ခင်းခြင်း မိုင်(၆၀၀)ကျော်၊ (၁၈)ပေအကျယ်၊ ကတ္တရာ “လမ်းချဲ့”ခင်းခြင်း မိုင်(၆၀၀)ခန့်၊ တံတားနှင့် ရေထုတ်ပြွန် အစင်းပေါင်း (၄၀၀၀)ခန့် တို့ကို ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများဖြင့်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင် ကုမ္ပဏီများ၏ B.O.T စနစ်ဖြင့် လည်းကောင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယနေ့ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ပွန်ချောင်းတံတားသစ်ကြီး သည် ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် အလွန်အရေးပါသော တံတား(၁)စင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ တံတားတည်နေရာသည် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင်နှင့် လင်းခေးခရိုင်နယ်စပ်တွင်ဖြစ်ပြီး အဓိက National High way လမ်းမကြီးဖြစ်သည့် တောင်ငူ-လိပ်သို-ယာဒို-လွိုင်ကော်-ဟိုပုံးလမ်း NH21 နှင့် နမ့်စန်-မိုးနဲ-မိုင်းတုံ-မိုင်းဆတ်လမ်း NH23 တို့ကို ကွန်ယက်ဆက်ပေးသည့် လမ်းပေါ်က သဘာဝအတားအဆီးကြီးဖြစ်သည့် ပွန်ချောင်းကို ဖြတ်ကျော်တည်ဆောက်ထားပါကြောင်း၊ ယနေ့တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်လိုက် သည့် သံကူကွန်ကရစ်တံတားသစ်ကြီး ခံနိုင်ဝန်မှာ ယာဥ်(၁)စီးချင်း ခွင့်ပြုတန်ချိန်(၆၀)အထိ သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုန်စည် စီးဆင်းမှုတွင် ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန် လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ လမ်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ဦးသူရဇော်မှ လမ်းတံတားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ရှင်းလင်း ပြောကြားရာ ပွန်ချောင်းတံတားသည် စုစုပေါင်းပေရှည်(၁၉၀)ပေရှိပြီး တံတားအကျယ်မှာ (၃၀)ပေစီနှင့် သံမဏိ သံပေါင်ယက်မ၊ သံကူကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ်(၉၇၄.၅၀၀)သန်းကို ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ကျခံ၍ တံတားအထူးအဖွဲ့(၁၂)မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ပွန်ချောင်းတံတားသည် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နှင့် လင်းခေးခရိုင်တို့ကို ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး တံတားကြီး တည်ဆောက်ပေးလိုက်သည့်အတွက် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း ဆက်သွယ်သွားလာရေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဒေသခံဦးခွန်လှထွန်းမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး ပွန်ချောင်းတံတားအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်စံလွင်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်နှင့် မောက်မယ်မြို့နယ်တို့မှ ပြည်သူ့လွှတ်ကိုယ်စားလှယ်တို့မှ အသီးသီး ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး ကမ္ဗည်းကျောက်စာအား အမွှေးနံ့သာရည်များ ပက်ဖျန်းပေးကြကာ လမ်းတံတားအား လှည့်လည်စစ်ဆေး ကြည့်ရှုကြကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်ရွေးကောက်ပပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့နယ် Covid -19 ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် တွေ့ဆုံ
လွိုင်လင် အောက်တိုဘာ - ၇
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် ၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးနေလင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် အောက်တိုဘာ(၇)ရက် မွန်းလွဲ(၂)နာရီခွဲက လွိုင်လင်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့နယ် Covid-19 ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် တွေ့ဆုံကြောင်း သိရသည်။
လွိုင်လင်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းတင်မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းပြီး လွိုင်လင် မြို့နယ် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းလွင်နှင့် နမ့်စန် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးညီညီအောင်တို့မှ Covid-19ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ ရှင်းလင်း တင်ပြကြသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး လှဦးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးနေလင်း တို့မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်မှာကြားရှင်းလင်းကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လုံခြုရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးတို့မှ လွိုင်လင်မြို့နယ်နှင့် နမ့်စန်မြို့နယ် Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီ အတွက် ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၁၀)သိန်းစီ၊ ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Mask(၂၅၀၀)ခုတို့ကို ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ လူမှု ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အသက်(၈၀)နှစ်နှင့် အသက်(၈၅)နှစ် ဘိုးဘွားများအတွက် ထောက်ပံငွေများကို ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်မှ ပေးအပ်ပေးရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါး ချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အက်စစ်ပုံးများ ဖျက်ဆီး
ခိုလမ် အောက်တိုဘာ - ၇
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ခိုလမ်နယ်မြေရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါး ချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အက်စစ်ပုံးများ ဖျက်ဆီးခြင်းကို အောက်တိုဘာ(၇)ရက် နံနက်(၁၁)က ခိုလမ်-ကျိုင်းတောင်းကားလမ်းမဘေးတွင် ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခု ခိုလမ်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ(၂၆)ရက်က တောင်ကြီးမြို့မှာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစပျိုးဓါတုပစ္စည်း များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုထည်ပမာဏများပြားသည့်အတွက် သယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်ရာတွင် မမျှော်လင့်သည့်အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက် ဇွန်လ(၂၆)ရက်နေ့က ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ဘဲ ဒီနေ့မှာ ဖျက်ဆီး ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို နှစ်အလိုက် နှိုင်းယှဥ်ကြည့် ပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ( ၃၁ )သန်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ( ၁၄၃ )သန်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၉)သန်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၁၅၀)ကျော်တန်းဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ဓာတု ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၆၅၁)သန်းတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး များကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ယခင်နှစ်ထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀၁)သန်း ပိုမိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း(၈၃၄.၉၄၁၈) သန်းတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့်အတွက် နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ခိုလမ်ဒေသတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးအစား(၁၀)မျိုး၊ အစပျိုး ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား(၂၄)မျိုး၊ စုစုပေါင်း ကာလတန်ဖိုး ကျပ်( ၂၁၂၁၁.၈၁၉ )သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိသည့် ပစ္စည်းများအပြင် မော်တော်ယာဥ်( ၈ )စီး၊ လက်နက်နှင့် ခဲယမ်းများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးရမိတရားခံ ( ၃၉ )ဦးနှင့် တရားခံပြေး (၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၁)ဦးတို့ကို အရေးယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်စဥ် မူးယစ်ဆေးဝါး ပမာဏများစွာ ဖမ်းဆီးရမိ အရေးယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘ့ာနိုင်ငံများ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်ကြီးသည် ကျယ်ပြန့်လျက် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာတွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေသည့်ကြားက မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ဟာ ခြိမ်းခြောက်လျက် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အလေးထားရုပြုရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသွား သည်။
ဆက်လက်၍ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သန်းလှိုင်မှ အမှာစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် တင်တင်ကိုမှ ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အက်စစ်ပုံးများ၏ အမှုဖြစ်စဥ် အကျဥ်းအား ရှင်းလင်းရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်(၂၂)ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီ ၁၅မိနစ်အချိန်တွင် အမှတ်(၁၅၀)ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ ယာယီ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး ကျော်ဇင်လတ် ဦးစီးအဖွဲ့၊ အမှတ်(၁၅၂) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ ခေတ္တတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး အောင်မျိုးဦး ဦးစီးအဖွဲ့တို့သည် ခိုလမ်မြို့၊ နားပွဲကျေးရွာအနီး ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း(LD-963425)နေရာတွင်လည်းကောင်း၊ ရှေ့တန်းအမှတ် (၃၃၂) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောနောင် ဦးစီးအဖွဲ့သည် ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း (LD-958424)နေရာတွင် လည်း ကောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၃)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရီခန့်တွင် အမှတ်(၁၅၂)ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ ခေတ္တတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးဦး ဦးစီးအဖွဲ့သည် ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း(LD-972427)နေရာတွင် လည်းကောင်း၊ သြဂုတ်လ (၂၅)ရက်နေ့ ညနေ (၅)နာရီခန့်တွင် အမှတ်(၁၅၂) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ ခေတ္တ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးဦး ဦးစီးအဖွဲ့သည် ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း(LD-968432)နေရာတွင်လည်းကောင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်းအရ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးချက်လုပ်နေသော ဘိန်းချက်စခန်းအား တွေ့ရှိပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဆာလဖျူရစ်အက်စစ်အမျိုးအစား(၅)ဂါလံဆံ့ အပြာရောင်ကော်ပုံး (၅၄၅)ပုံး၊ (၅၀)ဂါလံဆံ့ သံပေပါ (၄၂)လုံး၊ (၅၀)ဂါလံဆံ့ အပြာရောင်ကော် ပေပါ (၂၀)လုံး၊ မော်တော်ယဥ်များဖြစ်သည့် လဇ်ခရုဇာအပြာရောင်(၁)စီး၊ သရီးကရောင်း(၃)စီး၊ ကန်တာယာဥ် (၁)စီး၊ ပါဂျဲရိုး (၁)စီး၊ ဗီဂိုး(၁)စီး၊ ဆက်စ်ကား (၁)စီး၊ စုစုပေါင်း မော်‌တော်ယာဥ် (၈)စီး၊ လက်နက်အမျိုးအစား ပွိုင့်(၂၂) (၁)လက်၊ တရုတ် လက်ပစ်ပုံး (၄၆)လုံး၊ တရုတ်စက်လက်ကျည် (၃၆၀)တောင့်၊ ပွိုင့်(၂၂)ကျည်(၆၀)တောင့်တို့အား ရှာဖွေတွေ့ရှိ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ ကြောင်း၊ ယခုနှစ်အတွင်း တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပသော မူးယစ်ဆေးဝါး မီးရှို့ဖျက်ဆီးပွဲတွင်လည်း ထည့်သွင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီး နိုင်မှု မရှိရခြင်းမှာ သက်သေခံပစ္စည်း ဆာလဖျူရစ်အက်စစ်ပေပါများအား ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်ပါက ပေါက်ကွဲပျက်စီးစေ တတ်သောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး မလိုအပ်သော အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ဖမ်းဆီးရမိသည့် နယ်မြေရဲစခန်းအပိုင် နယ်မြေအတွင်း၌သာ ယခုကဲ့သို့ မြေကျင်းထဲသို့ သွန်မှောက်ဖျက်ဆီးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ဖမ်းဆီးရမိ သော မူးယစ်ဆေးဝါး ချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အက်စစ်ပုံးများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး မြေကျင်းထဲသို့ သွန်ချဖျက်ဆီး ပေးကြကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးနေလင်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် အောက်တိုဘာ(၇)ရက် နေ့လည်(၁၂)နာရီက ခိုလမ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမ၌ Covid-19 ကော်မတီအဖွဲ့အား ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၁၀)သိန်းနှင့် ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းဖြစ်သည့် PPEဝတ်စုံ၊ Mask၊ မျက်မှန်လက်အိတ်၊ Hand Gel တို့ကို ပေးရာ ခိုလမ်မြို့နယ် Covid-19 ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ လက်ခံရယူသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခိုလမ်မြို့ဝင်/မြို့ထွက်နှင့် နမ့်စန် မြို့ဝင်/မြို့ထွက်၊ လွိုင်လင်မြို့ဝင်/မြို့ထွက်တို့တွင် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် တာဝန်ကျနေသော ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့များအား ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး လွိုင်လင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးမှ ပန်းခြံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဟဲဟိုးလေဆိပ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် မြေယာလျော်ကြေးနှင့် သီးနှံလျော်ကြေးများ ပေးအပ်
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ တောင်လေးလုံး COVID- 19 ရောဂါကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) သိန္နီ၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲ နှင့် နမ့်ခမ်း မြို့နယ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။